I-Air Condor yaseJamani ihlaziya i-Fleet nge-16 ze-Airbus A330neo Jets ezintsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Air Condor yaseJamani ihlaziya i-Fleet nge-16 ze-Airbus A330neo Jets ezintsha
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Isigqibo sikaCondor sokuphucula iinqanawa zakhe ezinde kunye ne-A330neos sizakuseta umlinganiso omtsha wenqwelomoya yenqwelomoya eya kwindlela yokuhamba ngenqwelo-moya ezinzileyo.
I-airline yaseJamani iCondor Flugdienst GmbH ivuselela iinqwelo zayo zokuhamba ixesha elide.
I-Condor iya kuthenga iinqwelo-moya ezisixhenxe zeAirbus A330neo.
I-Condor iya kuqeshisa ezinye iinqwelomoya ze-Airbus A330neo.
I-airline yaseJamani uCondor Flugdienst GmbH ukhethe Airbus I-A330neo yokuhlaziya iinqwelomoya zayo ezinde kunye nezicwangciso zokwazisa ngeenqwelomoya ezili-16 zolu hlobo lutsha nolusebenzayo. I-airline ityikitye isivumelwano kunye ne-Airbus yokuthenga ii-Airbus A330neo ezisixhenxe, kwaye izimisele ukuqeshisa ezinye ezisithoba.
I-Condor yinkampani yeenqwelo moya yakutshanje yoku-odola inqwelomoya ye-Airbus yobume be-A330neo widebody, izisa utshintsho lwenyathelo lokusebenza kunye noqoqosho. I-airline izakusebenzisa i-A330neo kuthungelwano lwayo lwamazwe aphesheya oluya kumazwe aseMelika, eAfrika, eCaribbean naseAsia.
“I-Condor igqwesa ekusebenzeni ngenzuzo kwiindlela ezininzi akukho namnye umntu ophetheyo okwaziyo ukwenza oko; Siyazingca ngokubona inqwelomoya enqwenelekayo enje ngeCondor ikhetha itekhnoloji yethu yakutshanje i-A330neo njengeenqwelomoya ezikhethiweyo, zisakha ikamva leenqwelomoya zabo ngokubanzi ekuqhubekeni befuna iindleko ezisezantsi zokusebenza kunye nentuthuzelo yabakhweli, utshilo uChristian Scherer, oyiNtloko yeNtengiso yeAirbus. Igosa kunye neNtloko yeZizwe ngezizwe. "Ngokusebenza ngeenqwelo moya ze-A320 kunye ne-A330neo ecaleni kwelinye, inqwelomoya iya kuxhamla kulo lonke uqoqosho oluqhelekileyo kwezi mveliso zimbini zepremiyamu, kunye nokuguquguquka okulungisiweyo ukujongana neemarike ezintsha nezikhoyo ngenqwelomoya olungileyo, olungileyo."
UChristian Scherer wongeze wathi, "I-A330neo iphumelele ukhuphiswano olucokisekileyo kwakhona, njengoko kunjalo kuninzi lovavanyo lokhuphiswano kule minyaka mithathu idlulileyo. Isigqibo sikaCondor sokuphucula iinqanawa zakhe ezinde kunye ne-A330neos ziya kuseta umlinganiso omtsha wenqwelomoya yenqwelomoya eya kwindiza ezinzileyo. Siyabulela kwaye siqhwabela izandla uCondor ngokuqinisekisa ixabiso elikhuphisanayo le-A330neo. ”
IPrincess Cruises Australia: ayisayi kuhla phantsi ...
IHawaii isungula inkqubo yokugonya ngaphandle ...
Iinqwelomoya ezisuka eBudapest zisiya eParis ziphinde zaqala ngoTransavia
I-Qatar Airways yandisa uvavanyo lwe-IATA Pass Pass
2021 Izixeko ezigqibeleleyo zaseMelika ukubhiyozela umhla wesine kaJulayi